k3x: isikhombimsebenzisi esibonakalayo se-k3d sokuphatha amaKubernetes | Kusuka kuLinux
k3x: isikhombimsebenzisi esibonakalayo se-k3d sokuphatha ama-Kubernetes
Kulabo abasebenza namaKubernet isicelo esilandelayo singaba nentshisekelo kuwe, abaningi bathambekele ekusebenziseni isitsha se-k3d njengoba kungasindi ukusebenzisa ama-k3s (ukusatshalaliswa okuncane kweRancher Lab kweKubernetes). I-k3d yenza kube lula ukudala amaqoqo ama-k3s awodwa noma ama-multi-node ku-docker, ngokwesibonelo ukuthuthukiswa kwasendaweni kumaKubernetes.
Futhi kulokhu I-k3x isiphakamiso esihle kakhulu sokukwazi ukuphatha i-k3d ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza, ngakho-ke ukuba neqoqo lakho lendawo leKubernetes kuyinto encane.
Esizeni sephrojekthi, I-k3x ichazwa njengelungele i:
Iba neqoqo elisha le-Kubernetes kumasekhondi ambalwa.
Hlola ukusetshenziswa okusha ngaphambi kokukhiqizwa.
Futhi, kuyasho lokho Izinhloso ze-k3x yilezi:
Ukwakha kalula, shintsha, futhi / noma ususe amaqoqo e-Kubernetes.
Ukukhulisa imisebenzi ebaluleke kakhulu ngezinqamuleli zekhibhodi zomhlaba.
Ukwehlisa ijika lokufunda lokusebenzisa amaKubernetes.
1 Ungayifaka kanjani i-k3x ku-Linux?
1.1 Ungayikhipha kanjani i-k3x Kubernetes Manager kuLinux?
Ungayifaka kanjani i-k3x ku-Linux?
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukufaka i-k3x kusistimu yabo, bangakwenza ngosizo lwamaphakeji weFlatpak, ngakho-ke kumele babe nokuxhaswa kwalolu hlobo lwamaphakeji afakwe ohlelweni lwawo.
Kakade usekelo olwengeziwe, vele ungeze indawo yokugcina yaseFlathub (uma ungenayo) noma uma usunayo, ungeqa lesi sinyathelo.
Ukufaka i-repository kufanele uvule ukuphela kusistimu yakho nakuyo uzokwenza thayipha umyalo olandelayo:
Futhi ukufaka i-k3x kusistimu, ungafaka iphakheji ngqo kusuka ku-Flathub ngokuthayipha umyalo olandelayo ku-terminal:
Noma futhi bangakhetha ukulanda iphakheji ngalo myalo:
Futhi qhubeka ukufaka iphakheji uzibeke kufolda lapho balande khona (okuthi uma bengahanjiswanga lapho benza umyalo wangaphambilini) ngokuthayipha umyalo olandelayo:
Y uma kungenzeka babe nephutha elilandelayo "Uhlelo lokusebenza com.github.inercia.k3x / x86_64 / master ludinga isikhathi sokusebenza org.gnome.Platform / x86_64 / 3.3 ebingatholakali ”.
Bangaphoqa ukufakwa ukuncika nge:
Lapho ukufakwa sekuphelile, bangaqiniseka ukuthi i-k3x ifakiwe kusistimu yakho futhi lokhu kungaqinisekiswa, ngoba kufanele babone ukuthi isiqalisi siyatholakala kumenyu yabo yohlelo lokusebenza.
Noma uma bengayitholi noma ingekho, Ungaqala i-k3x ngqo kusuka ku-terminal yakho ngokusebenzisa umyalo olandelayo:
Uma i-k3x isebenza, bazobona isithonjana esisha kuthileyi wesistimu ezokhombisa imenyu lapho uchofozwa.
Futhi kule menyu bazokwazi ukubona izenzo ezahlukahlukene abangazenza ngqo, ngaphandle kwalokho futhi inika amandla izinqamuleli ezithile zekhibhodi ukwenza izenzo. (lokhu kungabonakala kuzinqamuleli zekhibhodi)
Futhi, ukudala amaqoqo amasha kukuvumela ukuthi unikeze igama leqoqo, inani labasebenzi kuqoqo, futhi i-k3d izoqala nge-master node ezosetshenziswa futhi ukwenza umthwalo womsebenzi, kepha abasebenzi abengeziwe bangangezwa.
Ukulawulwa kweCluster nakho kuvunyelwe kwirejista yendawo lapho imininingwane yerejista yendawo ilungiselelwe kufasitelana lokuncamelayo
Kumele kuqashelwe ukuthi irejista yendawo yabiwa phakathi kwawo wonke amaqoqo adaliwe. Ukudalwa kwelog kuzodalwa uma udala iqoqo lokuqala olidingayo, futhi lizosuswa lapho lingasasetshenziswa ngamaqoqo.
Ungayikhipha kanjani i-k3x Kubernetes Manager kuLinux?
Okwalabo abafuna ukukhipha i-k3x Kubernete Manager kusuka ohlelweni lwabo, bazokwazi ukukwenza kalula futhi ukuthi kufanele bavule kuphela i-terminal futhi kuyo kufanele bathayiphe omunye wemiyalo elandelayo ukuqeda unomphela uhlelo kusuka kusistimu yabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » k3x: isikhombimsebenzisi esibonakalayo se-k3d sokuphatha ama-Kubernetes
I-Paragon ikhiphe ukusetshenziswa kwe-NTFS kwe-Linux kernel
Ukuvuselelwa kwenguqulo ye-Ubuntu LTS 20.04.1, 18.04.5 kanye ne-16.04.7 sekukhishiwe